कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख ३ गते मंगलबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख ३ गते मंगलबारको राशिफल !
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत २९, २०७५१६:४२ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
आज तपाइँ निकै भावनाशिल रहनु हुनेछ । कसैको बोलिले तपाइँको भावनामा ठेस पुग्न सक्दछ । माताको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउनेछ । मानसिक चिन्ता र शारीरिक अस्वस्थता रहनेछ । विद्यार्थीको लागी मध्यम समय छ । तपाइँको स्वाभिमान भंग हुनेछ ।
तन र मनबाट स्वास्थ्य र प्रफुल्लित रहनु हुनेछ । परिवारजनको साथ घरको प्रश्नको सम्बन्धमा चर्चा हुनेछ । मित्रको साथ प्रवासको आयोजना हुनेछ । आर्थिक मामलामा अधिक ध्यान दिँदा हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ । भाई-बन्धुको सहयोग मिल्नेछ । प्रिय व्यक्तिको साथ र सार्वजनिक सम्मान मिल्नेछ ।
थोरै विलम्ब र अवरोध पश्चात निर्धारित रुपले कार्य पुरा गर्न सक्नु हुनेछ । आर्थिक आयोजना सफल गर्न सक्नु हुनेछ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । विद्यार्थीको अध्ययनको लागी मध्यम दिन छ । स्नेहीजन र मित्रको साथ भेटघाट आनन्द हुनेछ । धन्दा अनुकुल वातावरण रहनेछ । आयमा वृद्धि हुनेछ ।
भावनाको प्रभावमा रहनु हुनेछ । कुटुम्बीजन, मित्र तथा सम्बन्धी त्यसमा सहभागी हुनेछन् । भेट सौगातको प्राप्ति हुनेछ । स्वादिष्ठ भोजनको आयोजना हुनेछ । मांगलिक अवसरमा उपस्थित हुने अवसर मिल्नेछ । आनन्ददायक प्रवास हुनेछ । धनलाभ हुनेछ । दाम्पत्यजीवनमा घनिष्ठताको अनुभव हुनेछ ।
अत्याधिक चिन्ता र भावनाको कारण शारीरिक र मानसिक रुपले निराशता र अस्वस्थता अनुभव हुनेछ । वादविवाद तथा संघर्षमा पर्नु हुनेछ । कोर्टको मामलामा सावधानी अपनाउनु होला । वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु आवश्यक छ । आयको अपेक्षा खर्च अधिक हुनेछ ।
बहु विध लाभ हुनेछ । व्यापार धन्दामा विकाशको साथ आयमा वृद्धि हुनेछ । नोकरी पेशा गर्नेको लागी लाभको अवसर मिल्नेछ । वैवाहिक जिवनमा सुख सन्तोषको अनुभव हुनेछ । पत्नी, पुत्र र ठुलाबडाको तर्फबाट लाभ हुनेछ । मित्रको साथ रमणीय पर्यटन हुनेछ । स्त्री मित्र विशेष लाभकारी साबित हुनेछ ।
परिवारमा आनन्द र उत्साहको वातावरण रहनेछ । कार्यालय र नोकरीमा य वृद्धि र पदोन्नतिको संयोग निर्मित हुनेछ । माताको तर्फबाट लाभ हुनेछ । प्रेरणाको श्रोत बन्नु हुनेछ । सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहनु हुनेछ ।
आज हरेक विषयबाट नकारात्मकताको अनुभव हुनेछ । थकान र आलाशको कारण स्फूर्तिको अभाव रहनेछ । मनमा गहिरो चिन्तनले सताउनेछ । नोकरी र व्यवसायमा अवरोध आउनेछ । शिर्ष अधिकारीको साथ वादविवादमा नउत्रिनु होला । विदेश गमनको अवसर निर्मित हुनेछ ।
वाणी र क्रोधमा नियन्त्रण राख्नु होला अन्यथा अनर्थ हुन सक्नेछ । चिसो र काफको कारण तपाइँको स्वास्थ्य खराब हुनेछ । मानसिक निराशताको अनुभव गर्नु हुनेछ । धन खर्चमा वृद्धि हुनेछ । निषेधात्मक कार्य तथा अनैतिक कामवृत्तिले कुमार्गमा लैजान सक्दछ ।
विचार, व्यवहारमा भावुकता विशेष मात्रामा रहनु हुनेछ । परिवारजन र मित्रको साथ खुशीपूर्वक आफ्नो दिन व्यतित गर्नु हुनेछ । तन मनमा स्फूर्ति र प्रशन्नता रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । दलाली, व्याज, कमिशन द्वारा तपाइँको आयमा वृद्धि हुनेछ । भागिदारीमा लाभ हुनेछ । सार्वजनिक जीवनमा तपाइँलाई मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ ।
आज गरिएको कार्यमा तपाइँलाई यश, कीर्ति र सफलता मिल्नेछ । परिवारमा मेल-जोल हुनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वस्थता बन्नेछ । विचार र व्यवहारमा अधिक भावुकता रहनेछ । नोकरीमा कर्मचारीको सहयोग मिल्नेछ । नोकरी वर्गबत्त लाभ हुनेछ । कममा धन खर्च हुनेछ ।
साहित्य लेखनमा सृजनात्मकता प्रकट गर्न सक्नु हुनेछ । विद्यार्थीको लागि राम्रो दिन छ । प्रेमीजन र प्रिय व्यक्तिको सानिध्य प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । कामुकता विशेष मात्रामा रहनेछ । शेयरमा लाभ हुनेछ । मानसिक सन्तुलन बनाइ राख्नु होला ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ ३१ गते शुक्रबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १७, शुक्रबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार १८ गते बुधबारको राशिफल !